JINGYE Steam Jackets Kettle dia manolotra fahalalahana faran'izay betsaka amin'ny karazan-vokatra rehetra ahafahana manatsatsika, manasoka, manendasa, mahandro ary mahandro sakafo isan-karazany toy ny:
Stews, hena nandrandrana, totozy, saosy, purees, ketchup, Jam. Ary koa kojakoja confectionary toy ny: Fudge, Tafé, Caramel, Jellies, Candies, Chocolate, ary maro hafa!
JINGYE Steam Jackets Kettle dia milina fandrahoan-tsakafo mety indrindra ho an'ny Ivotoeram-pisakafoanana lehibe, kantine, trano fisakafoanana, hopitaly ary mpamokatra Sakafo ara-barotra.
1. Fahafahana: 50L, 100L, 200L, 300L, 400L, 500L, 600L, sns;
3. TOSIKARATRA: 3 dingana 220/240/380 / 415V, na namboarina tamin'ny fenitra eo an-toerana;
4. Karazana fanafanana: propane ranoka (LPG), herinaratra, etona;
5. Flange & valizy fanadiovana;
6. Rafitra: fitongilanana amin'ny tanana, fitongilanana fiara ary karazana mijanona;
7. Karazan-tsivana isan-karazany, mba hahitana ny takiana amin'ny fizotran'ny fitaovana samihafa;
1.Ny fonony mihidy, ho an'ny fandrahoana sakafo ao anaty banga;
2. Amin'ny fonony mihidy, ho an'ny fandrahoana sakafo ao anaty tsindry;
3.Ny mixer shear avo, ho an'ny filàna fampifangaroana manokana;
4.Ny mpamporisika fihodinana roa heny, ho fampisehoana fampifangaroana tsara, sns;
Anaty / palitao
Manaraka: Pressure Cooker